मुस्ताङमा भीषण हिमपहिरो जादा विद्यालयका विद्यार्थीको भागभाग, ६ जना घाईते – List Khabar
Home / समाचार / मुस्ताङमा भीषण हिमपहिरो जादा विद्यालयका विद्यार्थीको भागभाग, ६ जना घाईते
मुस्ताङमा भीषण हिमपहिरो जादा विद्यालयका विद्यार्थीको भागभाग, ६ जना घाईते
admin November 14, 2021 समाचार Leaveacomment 46 Views
माघ १५ देखि विद्यालय खोल्ने सरकारको निर्णय !
फेरी एक हप्ता कार्यालय हरू बन्द? हेर्नुहोस् कुन् कुन् हुन् ती कार्यालय।
मुस्ताङको कोवाङमा भीषण हिमपहिरो ख’से’को जानकारी प्राप्त भएको छ । आईतबार विहान ११ बजेर ४० मिनेटको समयमा टुकुचे पिक (स्थानीयले मानापाथी हिमाल भन्छन) हिमालबाट हिउँ पहिरो ख’से’को मुस्ताङ जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।
हिउँपहिरोबाट मानवीय क्षति भने नभएको उनले बताए। मुस्ताङको थासाङ गाँउपालिका–३ स्थित कोवाङको याङदेल खर्क भन्ने ठाँउमा हिमपहिरो ख’से’को प्रजिअ शर्माले बताए। उनका अनुसार स्थानीयबासीको चरन क्षेत्र भएकोले जनावरलाई भने असर परेको छ। हिमपहिरो क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। हिमपहिरोले मानवीय त्रा’स ब’ढेको छ। अहिलेसम्मकै ठूलो हिमपहिरो भएको उनले बताए।
हिमपहिरोको छर्रा र हावाको त्रासले स्थानीय जनआदर्श अमरसिंह माविका विद्यार्थीको भागभाग भएको शिक्षक प्रकाश सुवेदीले बताए। उनका अनुसार भागाभागको क्रममा लडेर ६ जना विद्यार्थी घाइते भएका छन्। उनीहरुलाई उपचारका लागि सदरमुकाम जोमसोम झार्ने तयारी भएको छ। ‘हिमपहिरोबाट निस्केको हावाको बेग र छर्राले गर्दा विद्यार्थी ड’रा’एका हुन्,’ उनले भने। हिमपहिरोमा केही जंगली जनावर परेको हुन सक्ने संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जीवन थकालीले जानकारी दिए।
Previous स्कूलमा शिक्षकले धेरै होमवर्क दिएपछि सबै बच्चाहरुले मिलेर लिए यसरी ब’द’ला कि आमाबुवा छक्क परे …
Next चर्चित गायक योगेश्वर अमात्यका बारेमा खुल्यो नयाँ रहस्य, प्रहरी गर्यो ५ जनालाई पक्राउ
काठमाडौं । कोभिड १९ कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनो संक्रमणबाट बच्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले …
यस्तो छ तपाईको माघ ५ गते बुधवारको भाग्य